Maxay Naga Doonayaan!! - Man City Oo Uu Lama Filaan Ku Noqday Dalabkii Mid Kamida Kooxihii Codsiga Champions League Lagaga Ganaaxyo Gudbiyay. - Gool24.Net
Maxay Naga Doonayaan!! – Man City Oo Uu Lama Filaan Ku Noqday Dalabkii Mid Kamida Kooxihii Codsiga Champions League Lagaga Ganaaxyo Gudbiyay.
Sidii aanu horeba idiinla soo wadaagnay, Dhawr kooxood oo kamida kooxaha Premier League oo ay kamid yihiin Man United, Chelsea, Liverpool iyo Tottenham ayaa dhammaantood gudbiyay codsi ay ku doonayaan in Man City aan laga aqbalin racfaanka ay ka gudbisay ganaaxa Champions League laga saaray.
Manchester City ayaan qayb ka noqon doonin tartanka xiisaha badan ee Champions League xilli ciyaareedka dambe iyo midka xigaba kaddib markii UEFA ay ku ganaaxeen inay jabiyeen sharciga FFP ee dhaqaale wanaaga.
Si kastaba, Kooxda haatan difaacanaysa horyaalka Premier League ayaa markasta iyadu iska diidaysay inay wax qalad ah gashay waxaana ay racfaan u gudbiyeen maxkamadda dib u heshiisiinta kubadda cagta ee CAS.
Sida haatan la sheegay, Sky Blues ayaa si gaar ah lama filaan iyo fajac uu ugu noqday codsiga ay gudbisay Liverpool ee ay kaga mid tahay kooxaha doonaya in laga ganaaxo Champions League labada xilli ciyaareed ee soo socda.
Wargeyska Express Sport ayaa sheegaya in madaxda sarre ee Man City ay layaabeen waxa ku qasbay inay codsi gudbiso Liverpool oo kooxdooda 25 dhibcood hoggaanka horyaalka kaga haysa haatan isla markaana iyadu Champions League ciyaari doonta xilli ciyaareedka dambe waxkasta oo dhaca inta xilli ciyaareedkan ka hadhay.
In City ay haatan booska labaad ku jirto ayaa ka dhigan in kaalinta shanaad usoo bixi doonto Champions League xilli ciyaareedka dambe haddii gabi ahaanba racfaanka laga soo diido.
Chelsea oo afraad fadhida ayaa saddex dhibcood ka sarreysa Manchester United balse waxaan wax badan jirin oo aad ugu soo dhaw dhaw Tottenham, Wolves iyo Sheffield United.